HGH loogu talagalay Haweenka - Daaweynta anti-gabowga ee Thailand - HGH Bangkok
Hel dalacsiin! WhatsApp
Qaabka lacag bixinta Thailand
Habka lacag-bixinta caalamiga ah
Bixinta Courier ee Bangkok
THB EUR USD AUD JPY EUR iibiyey SGD MYR AED CHF HKD SAR
HGH loogu talagalay Haweenka - Daaweynta anti-gabowga ee Thailand
Hormoonka koritaanka Aadanaha ee ka hortagga da'da gabowga. Natiijooyinka tijaabooyinka caafimaad ee Thailand. 1999, Machadka Qaranka ee Thailand ee ku saabsan da'da ayaa daabacay mid ka mid ah daraasaddiisa muhiimka ah ee muhiimka ah ee la xiriirta waxtarka daaweynta beddelka iyada oo la adeegsanayo hormoonka koritaanka aadanaha (HGH).
Ujeedada daraasadani waxay ahayd ujeedo oo ma aha oo kaliya inay isku dajiso inay xaqiijiso waxtarka daaweynta hoormoonka HGH, laakiin in la sameeyo daraasad isku dheelitiran oo kor u qaadi doonta aqoonta caafimaadka ee la xiriirta adeegsiga HGH ee ka hortagga gabowga. Kaqeybgalayaasha daraasada ayaa loo qaybiyay laba kooxood.
Kooxda tijaabada ah ayaa laga helay duriin ah HGH, halka kooxda xakamaynta ay ka heleen cirbado ah 'placebo'.
Daraasad laba indhoole ah oo HGH ah
Daraasadda dabeecadda waxay ahayd mid laba indhoole ah, taas micnaheedu ma aha dhakhaatiirta ama bukaanku midkoodna ma ogayn cidda lagu duray cirbadaha HGH, laakiin yaa isku duray placebo. Daraasadani waxay sidoo kale ahayd dhacdo qaran oo ay ku jiraan kiliinigyo ka kala yimid Thailand oo dhan.
Kaqaybqaatay tijaabooyinka, labadaba bukaannada iyo qaar ka mid ah oo leh astaamo liidasho hoormoonka koritaanka aadanaha. Koox walxaha daraasaddan ka mid ahi waxay ahaayeen kuwo aad u weyn oo weyn oo awood u yeeshay inay bixiyaan heerar sare oo lagu kalsoonaan karo oo leh awoodda lagu ogaan karo xitaa heerarka hoose ee muhiimada.
Daaweynta HGH waxaa lagu daraa noocyo kale oo daaweyn ah
In kasta oo daraasaddan inta badan loogu talagalay daaweynta bedelka iyadoo la adeegsanayo hormoonka koritaanka aadanaha, haddii loo baahdo, bukaanku sidoo kale waxay heleen testosterone, progesterone iyo estrogen.
Ujeedada daraasadani ma ahayn oo keliya in lagu muujiyo faa'iidooyinka suurtagalka ah ee hormoonka koritaanka aadanaha iyo sida hormoonnada kale, sida testosterone, progesterone iyo estrogen. Waxay ahayd in la dardargeliyo sidoo kale suurtagalnimada daaweynta daweynta ee irbadaha HGH.
Isticmaalka HGH ee bukaanka soo sheegey
Dr. Thierry Hertoghe, ayaa daabacay daraasad caafimaad oo lagu badalayo daaweynta beddelka hoormoonka HGH ee la siiyo bukaannada ka cabanaya yaraanta hormoonka koritaanka aadanaha.
Bukaannadu waxay lahaayeen da 'aad u ballaaran oo da' ah. Bukaanka ugu da’da yaraa wuxuu ahaa 27 sano jir wuxuuna ahaa bukaanka ugu da'da weyn 82. Bilowgii daraasadda, Dr. Hertoghe iyo asxaabtiisa waxay si taxaddar leh u diiwaangeliyeen xaaladda dhammaan bukaannada.
Ka dib markii ay diiwaangeliyaan xaaladda caafimaad ee bukaankooda, waxay sameeyeen bedelka hormoonka 'HGH' inta lagu gudajiro laba bilood. Dr. Hertoghe waxaa lala helay bukaankiisa wuxuuna ka codsaday inay buuxiyaan sahan ay kaga jawaabayaan saameynta daaweynta ay leedahay iyadoo la adeegsanayo xogururinta oo sharraxaysa faa’iidooyinka ay ka heleen cirbadaha hoormoonka koritaanka aadanaha.
Kuwa soo socdaa waa liistada dhammaan su'aalaha weydiimaha iyo boqolkiiba bukaannada ka jawaabey oo muujinaya in xaaladdoodu hagaagtay.
Calaamadaha jirka ee yaraanta HGH iyo gabowga:
- Tirada yareynta laalaabkii wajiga - 75,5%
Duuduubku waa mid ka mid ah calaamadaha ugu muuqda ee gabowga. Maqaarku wuxuu bilaabaa inuu lumiyo fidintiisa iyo buuxnaantiisa oo waxay u samaysantay sidii khad fudud iyo laalaab qoto dheer. Inta ugu badan bukaannada ka faa iidaystay mudista hormoonnada koritaanka aadanaha, waxay muujiyeen in HGH ay jilicsanaatay khadadka wanaagsan ama ay horseedeen lumitaanka laalaabkii.
Cirbadaha hoormoonka koritaanka aadanaha ayaa awood u leh inay qoyaan unugyada maqaarka isla markaana hagaajiya awooda muruqyada wajiga, labadaba waxay door ka ciyaaraan waayitaanka laalaabkii.
- Maqaarka adag ee qoorta iyo wejiga - 67%
Marka ragga iyo dumarka da'da, murqaha ayaa hoos u dhacaya maqaarka, taas oo keenaysa maqaarka murqaha maqaarka. Ku dhawaad ​​saddex-meelood laba oo bukaanka Dr. Hertoghe ayaa sheegay in ay sabab u tahay daaweynta beddelidda hormoonada hormoonka aadanaha uu hoos u dhigay maqaarka maqaarka iyo wejiga. Talaalka HGH wuxuu awoodaa in uu kordhiyo murqaha jirka ee jirka, taas oo faa'iido u noqotay.
- Muruqyada adag ee adag waa 60.7%
In ka badan lix ka mid ah toban bukaannada ah ayaa lagu daray daraasadda Dr Hertoghe, laba bilood gudahood markii cirbad lagu duray HGH, murqaha ayaa isbeddelay. Hormoonka korniinka bini-aadamka wuxuu awood u yeeshay inuu kordhiyo, sida murqaha murqaha, iyo cabirka muruqyada iyagoo beddelaya muuqaalka qurxinta muruqyada iyo xooggooda.
Haddii bukaanku leeyihiin heerar caafimaad qaba hoormoonka koritaanka bini-aadamka, muruqyadu waxay helayaan tamar iyo shidaal nooc ah koritaanka insulin-sida koritaanka factor 1, kaas oo wanaajiya caafimaadka murqaha, gaar ahaan marka lagu daro jimicsiyo waxtar leh iyo cunno.
- Heerka hoose ee dufanka jirka - 48%
Ku dhawaad ​​kalabar bukaannada ka qeybqaatey daraasaddan iyadoo ay sabab u ahayd cirbadaha 'HGH' waxay beddeleen tusaha jirka. Hormoonka korniinka bini-aadamka wuxuu ka ciyaaraa door muhiim ah dheef-shiid kiimikaadka, kaasoo si weyn u saameeya sida muruqyada iyo keydinta dufanka xayawaanka ee jirka, laakiin gaar ahaan agagaarka bartamaha.
Beerka wuxuu HGH u beddelaa IGF-1, wuxuuna awood u leeyahay inuu jebiyo unugyada dufanka aan caafimaad qabin una beddelo tamar dheeraad ah!
- Maqaal qaro weyn, ka xoog badan ilaa 34.5%
In ka badan seddex meelood meel dadka jawaabeyaasha ah ayaa sheegay in isbedel weyn oo ku yimid codka maqaarka. Bukaankani wuxuu la kulmay isbeddel ku yimid qaab dhismeedka maqaarka. Natiijadu waa xiisadda muruqyada iyo dheecaanka unugyada oo kordha, ma aha oo keliya duuduubyada iyo maqaar qallafsanaanta ayaa u muuqda inay baaba'aan, laakiin isbeddelada jir ahaaneed waxay sidoo kale gacan ka geystaan ​​kordhinta dabacsanaanta iyo mugga maqaarka.
Unugyada maqaarku sida unugyada kale ee jirka waxay u baahan yihiin ficil ku habboon oo hawo leh. Unugyada maqaarku waxba kama duwana. Kala duwanaanshaha ayaa ah in maqaarku yahay xubin si joogto ah ugu dhaca cadaadiska dibedda, sida iftiinka qoraxda, heerkulka iyo dabaysha.
HGH waxay maqaarka ka ilaalin kartaa waxyaabaha ka hortagtaa kana hortagtaa fuuqbaxa, kaasoo ka caawiya maqaarku inuu ahaado mid waara, xoogna adkeysta waxyeelada.
- Kororka mugga timaha - 28,1%
In kabadan rubuc kaqeybgalayaasha daraasaddan waxay la kulmeen isbedelo timahooda ay ugu wacan tahay soo if-baxa hoormoonka koritaanka aadanaha. In kasta oo natiijadan togan ay tahay halkii jaamacadda, qayb muhiim ah oo ka mid ah kuwa qaatay daaweynta HGH, tixgeli timo caafimaad ka wanaagsan daweynta.
Marka unugyada maqaarku ay si habboon u fuuq-celiyaan oo ay dib-u-cusboonaysiiyaan, waxay sidoo kale xoojisaa caafimaadka timaha timaha. Xirmooyinka timaha waa fudud unug unug unugyada maqaarka ah sidaa darteed caafimaadka maqaarku wuxuu kaloo door toos ah ka ciyaaraa caafimaadka timaha. Fahamka iyo isticmaalka shucuurta germanosilicate ee daaweynta hoormoonka, koritaanka aadanaha
- Isugeyn guud ee isku-dheelitirka shucuurta - 71,4%
Ku dhawaad ​​saddex-meelood meel bukaannada ayaa soo maray horumar guud ahaan shucuurta. Yaraanta hoormoonka korniinka bini aadamka muddo dheer ayaa keentay hoos u dhaca caafimaadka maskaxda iyo natiijooyinka daraasaddan waxay bixinayaan caddeyn dheeraad ah oo muujineysa in yaraanta hoormoonka koritaanka aadanaha uu ka sii dari karo caafimaadka maskaxda.
Bukaano badan, HGH waxay awoodaan inay nolol maalmeedka ka dhigaan mid u dulqaad badan oo raaxo leh. Tani waxay qayb ahaan sabab u tahay isbeddelada is-aragtida ee ka dhasha isbedelada jireed ee ku dhaca jirka, laakiin HGH sidoo kale waxay awood u leedahay inay wanaajiso kimistariga maskaxda!
- Heerarka tamarta oo kordhay - 86.8%
Waxaa ka mid ah bukaannada ka qeyb qaadanaya daraasadda. Thierry, ku dhawaad ​​9 oo ka baxsan bukaannada 10 kasta waxay la kulmeen heerar tamar badan. Bukaanka badankood ee la xanuunsanaya xanuunnada, HGH yaraanta waxay muujisaa daal. HGH waxay awood u leedahay inay kiciso jirka, waxay kugu caawineysaa inaad feejignaato oo aad aad u rabto inaad maalin qaadatid. Hormoonka korniinka bini-aadamka ayaa tan u leh sababo badan awgood.
Mid ka mid ah sababaha ayaa ah in ay kordhiso awoodda jirka si uu uhelo waxa ugu dambeeya ee cusbooneysiinta natiijada hurdada. Sababta kale ayaa ah in burburka dufanka xoolaha, oo ay sabab u tahay IGF-1, ay jirka siiso heerar sare oo tamar heer kiimiko ah.
- Kordhinta jirka - 86,04%
Marka la barbar dhigo heerka tamarta guud, hoormoonka koritaanka bini'aadamka wuxuu awoodaa in uu kordhiyo awooda jidheed ee shaqeynaya kuwa qaba dhibaatada hormoonkan.
- In kabadan 85% jawaab bixiyaasha tijaabooyinka caafimaad.
Thierry wuxuu sheegay in natiijada hargabka HGH ay sii korodhay awooda lagu sameeyo jimicsi iyo shaqo jir ahaaneed. Hormoonka korniinka bini-aadamka wuxuu muujiyaa heerar korodh ah oo dheef-shiid kiimikaad kaasoo siiya murqaha inay kordhaan tamar. Kordhinta tamarta waxay xoojineysaa awooda jirka ee u adkeysaneysa heerarka jimicsiga jirka ee kordhay iyo waliba kordhinta isticmaalka shaqadan.
Sidoo kale, daaweynta bedelka hoormoonka HGH waxay kordhisaa heerka jirku ku soo kabsado jimicsi iyo dhaawac kadib. Soo noolaynta firfircoonida Kordhinta firfircoonida inta lagu jiro saacadaha hurdada waxay ka dhigan tahay inaad jimicsi adag sameyn karto marar badan adigoon dareemaynin daal.
- Ma seexan kartid sariirta goor dambe oo saamaynta taban ee aad u yar - 82,5%
Daaweynta lagu beddelo hoormoonka korniinka bini-aadamka wuxuu wanaajiyaa awoodda jirka si uu uga faa iideysto hurdada. HGH si gaar ah ayaa loo xafidaa habeenkii oo waxaay dhacdaa marka jirku ka soo kabto daal iyo duugis, ilmeyntii la ururiyey maalintii. Bukaanka leh cillad la'aanta HGH, jirka ma la kulmayo faa'iidooyinka buuxa ee hurdo caafimaad oo ugu dambeyntii way ku xanuunsataa.
In kasta oo kuwa ugu waxtar badan ay tahay inay seexdaan habeenkii sideed saacadood, bukaannada leh heerarka HGH caafimaad qaba, haddii loo baahdo, waxay si fiican ugu shaqeyn karaan hurdo yar. Intaa waxaa sii dheer, bukaannada qaba dhibaatooyinka hurdo dhexdhexaad ah, HGH waxay kaa caawin kartaa soo celinta caadooyinka hurdo caafimaad qabta, dib u soo celinta heesaha dabiiciga ah ee jirka.
- Kordhinta kartida looga hortago walbahaarka - 83,7%
Cadaadisku waa mid ka mid ah waayo-aragnimada ugu wayn ee adduunka casriga ah. Walaaca iyo fekerka ayaa ka hortagi kara wax kasta oo ka yimaada farxad si is-wax u qabasho ah, sii kordhiya khatarta jirro jireed sida xanuunka wadnaha, hurdo la'aan iyo istaroog. In ka badan 4 ee bukaannada 5 ee daraasaddan ku daaweynaya daaweyn laba-bilood ah ee HGH hoos u dhigtay heerarka walbahaarka. Bukaannada qaba hargabka HGH waxay u muuqdaan inay kordhinayaan heerarka cortisol waxayna yareynayaan heerarka tamarta, taas oo ka dhigi doonta inay u nugul yihiin walaaca.
Agabyada boggan ayaa laga yaabaa in lagu nuqulo goobo kale oo ka dhex jira shabakaddayada "HGH Thailand" laakiin ku saleysan ku saleysan xuquuqdeena
Loo soo diray: GoQuick ee Bangkok, HGH Bangkok, HGH Thailand
article Previous HGH Miisaaniyada Thailand | U isticmaal Genotropin baruurta lumisa Bangkok
Next article HGH Thailand - waxbadan ka baro Hormoonka Koritaanka Aadanaha ee Bangkok
Nagala soco on Facebook Naga hel bogga Twitter Naga hel Pinterest Naga hel Tumblr Naga hel LinkedIn
Xuquuqda daabacaadda © 2021 HGH Bangkok. | Nambarka Diiwaangelinta Ganacsiga: 0167552340004 | FDA La Ansixiyay